I-Comecocos 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Pacman: udlalwa kanjani igxathu negxathu
Ukudlala i-kite online mahhala, kufanele nje landela le miyalo igxathu negxathu:
Ngokushesha nje lapho ufaka isiza, umdlalo uzoboniswa esikrinini. Kufanele kuphela hit play futhi ungaqala ukukhetha ukucushwa okuthandayo. Uma usuphumelele umdlalo ungakhuphuka. Kukhona ingqikithi yamazinga angamashumi amabili nane.
Manje, uzothola izinkinobho ezithile eziwusizo. Can "Faka noma susa umsindo", Nikeza inkinobho"Play"Futhi qala ukudlala, unga"Misa kancane"futhi"Qala kabusha”Noma nini.
Uyakwazi ukudla wonke lawa maswidi ngaphandle kokudliwa.
Ngemuva kokugcwalisa umdlalo, chofoza "Qala kabusha" ukuqala phansi.
I-Pac-Man ngumlingiswa womdlalo odumile kusukela ngawo-XNUMX. Ingabe yethulwe iplanethi emidlalweni yevidiyo ezweni laseJapan ngoMeyi 1980, XNUMX. Umdlalo wafika ezinyangeni eziyisi-5 zase-US kamuva futhi wafinyelela ngokushesha kumakhophi ayi-000 athengisiwe.
Ngaphandle kwenguqulo ye-arcade, iPac-Man nayo yenzelwe i-Atari engu-XNUMX XNUMX. Eminyakeni edlule, umdlalo usuthole inqwaba nezinhlobo eziningi zezinguqulo ezivuselelwe zeziduduzo zesimanjemanje. EBrazil, umlingiswa owaziwa njengo-Come-Come naye waba yimpumelelo.
Ngaphezu kwezinto zonke, umqondo womdlalo bekuwukuqondisa umlingiswa ophuzi odla amaphilisi ku-maze. Ngasikhathi sinye, umdlali kumele abalekele izibuko ezi-4 ezizama ukumnqoba.
UNamco wayefuna igama elihlukile emidlalweni yabadubuli, ngazwi linye ngaleso sikhathi. Ekuqaleni, u-Iwatami wathola ukuthi wayenogqozi lomlingiswa ngokubona i-pizza ngaphandle kocezu.
Kodwa-ke, umsuka womlingiswa unezinye izinhlobo. Ngokusho kukaIwatami uqobo, ukubonakala kwe- Ikhayithi yagqugquzelwa ukubhala kwaseJapan kwegama elithi "kuchi", umlomo.
Ngokushesha nje lapho idaliwe, umlingiswa wayaziwa njengo Ikhayithi. NgesiJapane, ukupelwa kwepuck ne-pac kufana ncamashi, paku. Ngokomlando wezwe, kwakwaziwa ukuthi uPaku unesifiso esikhulu sokudla. Ngaphezu kwalokhu, leli gama lisebenza njenge-onomatopoeia ukuvula nokuvala umlomo lapho udla.
Ngakolunye uhlangothi, igama elithi Puck lizwakala kakhulu njenge-taco esiNgisini. Ngakho-ke ngenkathi umdlalo ulethwa eMelika, uNamco wakhetha ukuwubiza ngokuthi yiPac-Man.
Yize yethulwe okokuqala eJapan, bekungukufika e-US lapho ishiye khona uphawu lwayo kumasiko we-pop. Impumelelo yalo mdlalo ibimangalisa ngendlela yokuthi ku-nje Iminyaka eyishumi yokushicilela yakha isigidigidi samaRandi, kuphela kumagumbi emidlalo e-US.
Kule minyaka eyishumi ezayo, inani laphindeka kabili, lafinyelela ku-US $ 500 billion. Namuhla, i-franchise inyuse cishe izigidigidi eziyishumi nantathu emhlabeni jikelele. Lokhu kusho ukuthi lidlulwa kuphela ngabahlaseli bendawo (cishe nama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi nane) kuhlu lwenzuzo enkulu emhlabeni.
Kusukela enguqulweni yokuqala emidlalweni yamaphasishi, iPac-Man inqobe ama-sequels angaphezu kwamashumi amathathu. Umlingisi usabonakala emidlalweni edlula i-franchise yakhe. Ku-Super Smash Bros, ukukhonza njengesibonelo, ibhola eliphuzi lingakhethwa njengomunye wabalwa.
Ikhayithi ngumdlalo we-elekthronikhi owenziwe ngu Tōru Iwatani enkampanini Namco. Yakhelwa okokuqala i-Arcade ngawo-80, yaba ngomunye wemidlalo edlalwe kakhulu futhi ethandwayo namuhla, enezinguqulo zesimanje zeziduduzi eziningi kanye nokulandelana kwabanye abaningi.
Kungumdlalo olula kakhulu: umdlali wayengu- ikhanda eliyindilinga elinomlomo evula futhi ivale, isethwe kumugqa olula ogcwele amaphilisi kanye ama-specter amane amzingelayo. Igoli bekungukuthi udle ithebhulethi ngayinye ngaphandle kokushaywa yizipoki, ngezinga eliqhubekayo lobunzima.
UPac-Man ungomunye wabalingiswa abathandwa kakhulu nabaziwa kakhulu kuma-consoles wegeyimu yevidiyo ngawo-XNUMX. Ubufakazi balokhu ukuthandwa kwayo ngisho naphakathi komncane kunabo bonke, ongazange ayidlale nemidlalo yayo.
Futhi uma ungumuntu othanda lo mlingiswa ophuzi omncane ohahayo, bheka inhlebo ethile mayelana ne-franchise yakhe.
Injongo yomdlalo udle wonke amathayili we-maze ngaphandle kokushaywa yizipoki. Lapho ushayisana nethebhulethi, i- Ikhayithi iyayigwinya futhi kufanele inyamalale enkingeni. Uma umdlali edla ithayela ngalinye emzulini, umdlali uyadlula esiteji. Uma umdlali edla wonke amathayili kuwo wonke ama-mazes wamahhala, uwina umdlalo.
Ukunyakaza kuphela okulawulwa ngumsebenzisi yi uhamba ngezinkinobho eziqondisayo ubheke phambili, ubheke emuva, ngakwesobunxele nangakwesokudla, ngenhloso yokugwema izibuko nokudla amaphilisi asakazeke kuzungeze i-labyrinth.
Lapho i-specter ishayisana ne- Ikhayithi uyafa, ngaleyo ndlela alahlekelwe yimpilo. Umdlali unezimpilo ezimbili ezingeziwe, ezikhonjiswa kubha engezansi kwesikrini. Uma ulahlekelwa yimpilo futhi usebenzisa enye impilo, inani lamaphilisi asele esigabeni lihlala lingashintshiwe kusukela ngesikhathi sokushona Ikhayithi, wonke umuntu ubuyela esimweni sokuqala sesigaba.
Esimweni esinjalo, ukugcwalisa isigaba (noma umdlalo), isidlali sidinga kuphela ukukhathazeka ngamaphilisi asele. Lapho umdlali elahlekelwa yimpilo yakhe ngokushayisana nama-specter, alahlekelwa ngumdlalo.
Ijubane le-spectra ne Ikhayithi kuyafana ncamashi, kepha, njengakumdlalo wokuqala, ama-super-tablet anciphisa i-spectra ngephesenti futhi avumele I-Pacman wawaqeda.
Lapho zidliwa, kusala kuphela "amehlo esipoki", okumele abuyele enkabeni ye-labyrinth, lapho izinsalela ze-specter ziphinde zibe yisiphepho esizophinda sihluphe I-Pacman. Esigabeni ngasinye kunamaphilisi amane amakhulu. Umakhi unquma ukuthi amaphilisi amakhulu azohlala isikhathi esingakanani.
Ithebhulethi ngayinye edliwe inamaphuzu ayishumi, ithebhulethi ngayinye edliwe ibiza amaphuzu ayikhulu, futhi ispereji ngasinye esidliwe sinamaphuzu angamakhulu amabili. Umdlalo kufanele uhlale okungenani izigaba ezi-2.
Lapho enza lo mdlalo, uToru Iwatani wayefuna ukuheha ababukeli besifazane kwifomethi engezansi enobudlova futhi enobudlova. Ngaphandle kwalokhu, amakamelo emidlalo aqhubeka nokuba yizikhala zabesilisa ikakhulukazi. Ngakho-ke, umthuthukisi wayedinga ukudala enye inketho ehlukile.
Kodwa-ke, ikhambi lichitheke kungalindelekile. Impumelelo yePac-Man ikhuthaze ukwakhiwa komdlalo uCrazy Otto. Nge-gameplay ecishe ifane nenguqulo yesifazane yomlingiswa oyinhloko, umdlalo wawungekho ukuxhumana noNamco.
Ngakho-ke, uMidway, onamalungelo kaPac-Man e-USA, yagcina ithenge uCrazy Otto futhi wayikhipha ngaphansi kwegama likaNks Pac-Man. Umdlalo ulethe izinto ezintsha njengamazes amasha nejubane elingaphezulu.
Ngemuva nje kwempumelelo emidlalweni, i-franchise yathola ukudonsa kweminye imithombo yezindaba. Eminyakeni eyishumi nesishiyagalolunye nesishiyagalombili nambili, umlingisi uzuze inguqulo yochungechunge lwe-animated olubizwa Umkhuhlane we-Pac-man. Idizayini yakhiqizwa nguHanna-Barbera, obhekene nemikhiqizo yendabuko efana neFlintstones neJetsons.
Ngaphezu kwalokhu, umlingiswa kwakuyisilwane sokuqala se- imidlalo yevidiyo. Kusukela yaqala ukubonakala, inemikhiqizo enophawu olufana nodoli, izikibha, ojosaka nokunye okuningi. Ngokushesha yaba ngelinye lamagama womdlalo abonakala kakhulu ngaphandle kwabezindaba.
Okokugcina, umthelela wayo kwiplanethi yemidlalo ufana nokuthi nababhali be-GTA bathe umdlalo ufana Ikhayithi. Ngokusho konjiniyela, le midlalo emi-2 imayelana nomlingiswa othuthuka ngamaphuzu ebalazweni (abahamba ngezinyawo / amaphilisi) ngenkathi exoshwa abaphikisi bakhe (amaphoyisa / izipoki).
Amaqiniso ajabulisayo ngePac-Man
Umdlalo wokuqala, osukela eshumini nesishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalombili, ungomunye weshumi nane okuyingxenye yokuhlanganiswa komdlalo we I-New York City Museum yobuciko besimanje.
IPac-Man bekungumdlalo wokuqala ukufaka imishini yamandla yesikhashana ngento ethile. Umbono uphefumulelwe ubudlelwano bukaPopeye nesipinashi.
Ngamunye wabaphikisi emdlalweni unobuntu obuhlukile. Lokhu kuyacaca lapho sibheka amagama abo ngesiJapane: Oikake obomvu (IStalker), UMachibuse upinki (Ambush), I-Kimagure eluhlaza okwesibhakabhaka (Akuzinzile) futhi Otoboke orange (Isiphukuphuku). EsiNgisini, amagama ahunyushwa njengoBlinky, Pinky, Inky, noClyde.
Yize umdlalo ungapheli, ungaba nomdlalo ophelele. Iqukethe i- qeda amazinga angamakhulu amabili namashumi ayisihlanu nanhlanu ngaphandle kokulahlekelwa yimpilo bese uqoqa into ngayinye emdlalweni. Ngaphezu kwalokhu, i-spectra ngayinye kufanele isetshenziswe ngomsebenzi ngamunye wokuqinisa amandla.
Ukuhlonipha ilungelo lomdlalo, i-Google ibhale inguqulo edlalwayo yePac-Man ngosuku lokugubha iminyaka engama-XNUMX lomdlalo.